Xildhibaanno wali Guddiga Maaliyadda ka difaacaya Kuxigeennada Guddoonka Golaha Shacabka – Kalfadhi
Xildhibaano ka tirsan Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalka Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee GolahaShacabka, Mahad Cabdalla Cawad, ee ahaa inuusan Guddiga Maaliyaddu sharciyad haysan, oo ay horay u kala direen Guddoomiye Kuxigeennada Golaha Shacabka.
Xildhibaan Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, oo xubin ka ah Gudiga Maaliyadda, ayaa ku tilmaamay hadalka kasoo yeeray Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka mid aan sharci aheyn. “Waa war iska dheh ah, oo aan wax sharciyad ah haysan, hadalka Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka,waxna kama duwana hadalkii hore ee ay ku sheegeen Kuxigeennada Golaha in ay kala direen Guddiga Maaliyadda bilaa sharci” ayuu yiri Xildhibaan Cilmi Maxamuud Nuur.
Xildhibaanku waxa uu sheegay in aysan Guddoomiye Kuxigeennada Golaha Shacabku awood sharciya u lahayn kala diridda Guddiga Maaliyadda. Waxauu sheegay iney Guddi Hoosaadyadu ka madax-banaan yihiin Guddoonka, oo ay iyaguisasoo doortaan. “Guddiga Maaliyadda waa Guddi u madax-banaan shaqadiisa korjoogtaynta ah” ayuu yiri Xildhibaan Cilmi Maxamuud Nuur.
Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi, oo si kooban uga hadlay Hadalka markale ka soo yeeray Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka, ayaa isaguna ku tilmaamay mid aan sal lahayn, sida uu hadalka u dhigay. “Guddiga Maaliyadda waa Guddi madax-banaan oo is doortay, kadibna Goluhu u codeeyay oouu kalsoonida siiyay, mana jirto cid kala diri karta” ayuu yiri Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi.
Waxa uu sheegay inuu Guddoomiye Cawad doonayo inuu siixoojiyo qalad uu horay u galay, sida uu hadalka u dhigay. “Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka wax awood ah uma lahan in uu kala diro Guddi, waxa uuna sii xoojinayaa qaladka ay horay u galeen” ayuu ku yiri wareysi uu siiyey Kalfadhi.
Hadalka Xildhibaannadan waxa uu yimid markii uu shalay Guddoomiye Cawad ku yiri qodobka 5-aad warqad uu shalay soo saaray oo kakoobneed 7 qodob “Ma aqoonsani Guddiga Miisaaniyadda iyo Maaliyadda, oo la kala diray 28-kii Nofeembar, 2018”. Markaas, waxa uu Cawad ka jawaabayeygo’aanka uu Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal, ku ogolaaday inuu guddigaas sii wato shaqadiisa. Cawad ayaa u soo jeediyey Mursal iney sameeyaan guddi KMG ah.
Guddiga Doorashada KGS oo ka foyijigan inuu musuq galo Doorashada Madaxweynaha